Nin suuxay oo soo naaxay isagoo la aasi rabo
Photo | Cali Koronto oo ay Ergo kula kulantay Baydhabo/Muxyadiin Xusni/Ergo
Radio Ergo 16 May, 2017 BAYDHABO
(ERGO) - Cali Maxamuud Aadan (Koronto) waa 38 sano jir ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa la aasi lahaa maalin maalmaha ka mid ah isaga oo nool, laakiin suuxsan, wuxuu soo naaxay intaan godka la galinin.
Cali, ayaa la xanuunsanayay firirro madaxa ka galay oo ka soo gaaray qarax sanadkii 2009-kii ka dhacay hotel Shaamoow, ee magaalada Muqdisho, xilligaas oo uu ku sugnaa xaflad halkaas ka socotay.
Weriyaha Ergo ee Baydhabo Muxyadiin Xusni, ayaa la kulmay, wuxuuna ka sheekeynayaa wixi kala qabsaday marki uu soo naaxay isaga iyo dadkii meyd ahaanta u qaaday ee qabriga u waday.
Halkaan hoose ka dhegeyso sheekada oo aad u xiiso badan